Mna ke wenza cottage greenscreenen kunye nezilwanyana | Apg29
Omnye wabuza ukuba inja yam, akukho, its wenza isikrini eluhlaza!
Zobuchwepheshe eluhlaza screen kunye nemifanekiso eziliqela kunye neevidiyo, ndiye kule ndlu kunye nezilwanyana.
Isikrini eluhlaza kunye nezixhobo elula kakhulu, wena ngokusisiseko kufika nto. Funda apha indlela enza ngayo igumbi ividiyo kunye nezilwanyana.
Molo, ndiyabulela kuwe kuba umsebenzi okhutheleyo wenze yonke imihla. Isicaka weqiniso uhlwayela imbewu. Ngoko ndifuna ukubulela kuni.
Emva koko uzibuze mna, ngaba ufumana njani ezi cool kunye ofudumeleyo neemvelaphi? Njengokuba asifani cottage kunye nezilwanyana! It has kakuhle screen eluhlaza, kodwa kuthenga njani kwiindawo ezinjalo?
Siyabonga ngalo lonke okwenzayo.
Bukela ividiyo cottage kunye nezilwanyana
Ndisebenzisa inkqubo simahla ekuthiwa QAPHELA-studio . Ngalo ungathumela ngqo kwaye usebenzise umsebenzi eluhlaza screen .
Udonga emva kwam wambu ilaphu eliluhlaza.
Ukuze ubone isikrini oluhlaza xa kungekho imifanekiso elungiselwe ngoncedo lwekhompyutha.
Ezi imifanekiso efumaneka simahla ukusuka pixabay.com , ukongezelela landscape ubusika ukuba mna isithombe.
Videos I sebenzisa:
Ezi ividiyo youtube ukuba abasebenzisi baye banikwa imvume yokusebenzisa ngokukhululekileyo. Ludla bhala ukuba ungasebenzisa okanye hayi. Kwakhona kukho ngokuqinisekileyo kakhulu online ukuba ungenza umxokozelo simahla, ukongezelela koko iindleko.
Kutheni na nisenza oku?
Ngokuba ndifuna ekusasazeni ivangeli kaYesu Kristu, uNyana kaThixo. Ezi program ziye iimfundiso ngakumbi elula kaYesu kunye inkcazo ecacileyo ukwamkela uYesu Kristu baze basindiswe.
Oku injongo yonke Apg29. Ukuba abantu bafanele ukufumana iVangeli elula kangangoko kunokwenzeka thaca ngokwahlukeneyo ukuze bakwazi ukufumana uYesu.
Nceda ukusasaza Apg29 kunye ezi vidiyo ukuba abaninzi kangangoko kunokwenzeka. Mabeve ke abantu isigidimi elula weNkosi yethu uYesu Kristu, ukuze nabo babe nethuba lokufumana kuye baze basindiswe.